उत्कृष्ट नेताका ५ सर्वोत्तम नेतृत्वदायी गुणहरु - LiveMandu
Home जीवन जीवन शैली
उत्कृष्ट नेताका ५ सर्वोत्तम नेतृत्वदायी गुणहरु
in जीवन शैली, बिशेष
कसलाई उत्कृष्ट नेता भन्ने ? भाषण या व्यबहार या दुबै कुराहरु ? या अन्य कुराहरु ? यी नै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै,आउनुहोस बिश्वभरिका सर्वोत्तम राज नेताहरुको गुणलाई बिष्लेषण गरेर तयार गरिएको उत्कृष्ट नेतृत्वका ५ गुणहरुका बारेमा चर्चा गरौं ।
यस आलेख बेलीफीट नामक अग्रेजी पत्रिकाले निकालेको नेतृत्व संसमरण बिशेष बाट साभार गरिएको हो ।
राजनितीमा सदैव ईमन्दारीता अपनाउनु एकप्रकारको जोखिम पनि हो तथापि आफ्ना गल्ती अनि कमजोरीहरु औंल्याएको मा धन्यवाद दिने र स्वीकार गर्ने गुणलाई राजनेताको प्रथम गुणका रुपमा लिइन्छ ।
ईमान्दारीताले अरुहरुको बिश्वास जित्न अनि चरित्र बनाउन पनि मद्धत गर्दछ तर राजनितीमा ईमान्दारीताको सही अनि ईमन्दार उपयोग जरुरी छ ।
ईमान्दार नेताहरु हक्की, निडर अनि आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरुवाट अत्याधिक आदर पाँउने खाले हुन्छन् । ईमान्दार नेताहरु गल्तीको साहसीक जिम्मेवारी आँफैले लिने हुन्छन भने अरुहरुलाई आरोप लगाउने खालका हुँदैनन् ।
दयालु भन्नाले अरुहरुको पीडाको आत्मसाथ र सदैव ति पीडालाई कम गर्न संरचना अनि प्रणालीको बिकास गर्ने सोच भएका नेतृत्व भन्ने बझ्न सकिन्छ । यसरी अरुहरुको पीडा अनि दुख्ख कमगर्ने ज्ञान भएका नेतृत्वको ज्ञान सीपमा बदलीन समय लाग्दैन । हुन त कतिले राजनीतीमा दयालाई कमजोरीका रुपमा पनि हेर्दछन् तर दया बिनाको नेतृत्व अधिनायकबादको शुरुवात हुनसक्दछ । समाज अनि राष्ट्रका औसत व्यक्तिको पीडा बुझेर त्यसअनुरुप कार्य गर्दै पीडा हटाउन अनि मुद्धाहरु सम्बोधन गर्न नेतृत्वमा दयालुपना हुन जरुरी हुन्छ ।
नेतालाई नेतृत्व गर्नका लागि बिचारले अरुहरु वाट अलग्ग बनाँउदछ । नेता र नेता बीचको फरक भनेकै उनीहरुको बिचार को फरकपना हो ।
यस्ता बिचारहरुमा नैतिकता र समानता र पारदर्शिताहरु प्रधान रहन्छन । बिचारप्रधान राजनेताहरु अझ धेरै बिश्वासयोग्य हुन्छन किनकि उनीहरुलाई व्यक्तित्व भन्दा पनि बिचारले बिश्वसनीय बनाँउदछ । कोट प्यान्ट लगाएर फरर अग्रेजीमा भाषन दिनसक्ने नेताभन्दा बिचारलाई उजागर गर्दै धारणालाई प्रमाणीत गर्दै सामान्य जीवनशैली बिताउने नेताको बिश्वसनीयता बढि हुन्छ ।
नेता तबमात्र नेता हुन्छ जब उसका अनुयायीले उसलाई निरपेक्ष बिश्वास गर्दछन् । पैसा, गाडी लगायत अवसरका कुनै रवाफहरुको लालसा बिनापनि कुनै नेतालाई कार्यकर्ताले बिश्वास गर्दछन् भने त्यो नेतामा बिचारप्रधानता अनि पारदर्शिता पक्कै रहेको हुन्छ ।
आत्मबिश्वासको कमी भएका नेतृत्वले भोली गएर सदन र संसदमा जनताको मुद्धालाई बुलन्दीका साथ उठाउन सक्दैनन ।नेतृत्वले आफु र आफ्नो नेतृत्वकला दुबैमा बिश्वास गर्न र जगाउन जरुरी हुन्छ । आत्मबिश्वास भाषन या घोषणापबले मात्र देखाउदैन, आत्मबिश्वास बिचार, जुझारुपना अनि ससाना व्यबहारले देखाँउदछ ।
राजनीती भनेकै एकप्रकारको लेनदेन जस्तो हुन्छ जहाँ नेतृत्वले जनताका मुद्धा अनि समस्या लगायत बिकासका लागि लचकतासाथ प्रस्तुत हुन पर्दछ । असल राजनेताले सबैपक्षका कुराहरु ध्यानपूर्वक सुनेर सर्वमान्य बिन्दुमा पुगेर सबैपक्षको जीतजीत परिस्थिती सिर्जना गर्न जरुरी हुन्छ । यि कार्य गर्नका लागि लचकता जरुरी हुन्छ, अरुहरुको बिचारको आदर अनि आफ्नो बिचारको महत्व दुबै एकैफेर दर्शाउन लचकता जरुरी हुन्छ । यो गुणले आफ्नो गल्ती सुधार गर्दै पून गल्ती नदोहोर्याँउदै अघि बढ्न नेतृत्वलाई प्रशस्त स्थान दिन्छ ।
नेपाली परिपेक्ष्यमा अनुभव, उमेर र अभिव्यक्तिलाई नेतृत्वको मुख्य गुण मान्ने चलन अझै पनि छ, राम्रो भाषन गर्ने या लेख्न अनि बोल्न सक्ने अनुहारहरु राम्रो नेतृत्व नहुन सक्दछन् । त यसो भन्दा लुकेर बस्ने अनि नबोल्ने या नलेख्ने अनुहारहरु सबै असल नेतृत्व हुन भन्ने मनसाय पक्कै हैन तर राम्रो अनुहार र परिवृतीभीत्र लुकेका कमअसल नेतृत्व छान्ने कार्य भने गरिन नेपालमा बाँकी नै छ । समस्याको बिष्लेषण र नवप्रवतनात्मक रुपले समाधानका उपाय खोज्न सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यक्ता हो, नेतृत्वको सही र गलत समग्र देशको हीत र अहीतले निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
तालीको भोका भन्दा गाली सुनेर अघि बढ्न सक्ने नेतृत्वको जरुरी छ, त्यसैले सक्षम नेतृत्वलाइ समर्थन गरौ !
Can't tell if I'm over you now
नियमित आलु खानुहुन्छ ? त्यसो भए जान्नुहोस् यी कुरा
महिला दलाई लामा अवतारका प्रश्नहरु
म त रोएँ सरकार !
चन्द्रमा स्पर्शको ५० वर्षे इतिहासको उत्सव मनाऔं
Western countries addressing the importance of Brahma Muhurta
ब्याकं ब्यालेन्स नभएको मान्छे म ।
Horrifying Mass Shooting in Christchurch Mosque, New Zealand
असार २७ शुक्रबार राशिफल
Bodhi HDBollywoodhealthHealth tipshealthy foodhealthy lifeIPL 2019KathmanduloveMeditationmotivationmusicNepalNepal idolNepal Tourism BoardThe Voice of Nepalअमेरिकाइन्दिरा प्रसाईकाठमाडौंकृष्णको बन्छ करोडपतिक्रिकेटचीनछठडा. निर्मलमणि अधिकारीद भ्वाइस अफ नेपालदिल्ली क्यापिटल्सनइ प्रकाशननरेन्द्र मोदीनरेन्द्रराज प्रसाईनिर्मल शर्मानेपालनेपालीन्यूजिल्याण्डपशुपतिनाथपाकिस्तानफेसबुकभारतमुसलमानविश्वशिवसंसारसन्दिप लामिछानेसार्वजनिकस्वास्थ